बन्यो नयाँ कानुन! बिदेश जाने पुरुषको श्रीमति भगाउनेलाई अबदेखि यस्तो छ जरिवाना सहितको जेल सजायँ ! - Sacho Post
बन्यो नयाँ कानुन! बिदेश जाने पुरुषको श्रीमति भगाउनेलाई अबदेखि यस्तो छ जरिवाना सहितको जेल सजायँ !
२०७७ फाल्गुन २९, शनिबार ०७:१० बजे
काठमाडौं // पाँचथरको प्रङबुङ गाविसमा दुई वर्ष अघि गाउँलेले बनाएको नियम अहिले पनि जारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीमान विदेशिने क्रमसँगै श्रीमतीले अनैतिक कार्य गर्ने गरेकाले समाजमा विकृति भित्रिएको भन्दै स्थानीयले अर्काकी श्रीमती लैजानेलाई ५ लाख भन्दा माथी जरिवाना तिर्नु पर्ने नियम बनाए ।
अर्काकी श्रीमती लानेलाई तत्काल सभा बसेर स्थानीयले ५ लाख रुपैयाँ तिराउँछन् । सो रकम पीडित श्रीमानका लागि रहात हुने स्थानीयको भनाई छ । तर पछिल्लो समय यस्ता नियमले समेत समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष दर्ता भएका मध्ये आधाजसो मुद्दा श्रीमान श्रीमतीबीचको बेमेलसँग सम्बन्धित छ । २० वटा सोही प्रकृतिका मुद्दामध्ये ९ मा श्रीमान विदेशिएपछि असमझदारी देखिएको छ ।
काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ सल्लाह सुझाव को लागि हामिलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नपाएका सचिनले विद्यालयनै टपे ! असाध्यै पढ्न मन छ तर घरको अबस्था निकै क`मजोर छ त्यसैले पढ्न छाडेर बसेको छु हजुर । कुनै बेला सचिन परियारले आफ्नो अन्तरवार्तामा आफुले आर्थिक अभावका कारण बिचैमा पढाई छाड्नु परेको दु:खेसो गरेका थिए ।
आफुसगं अथाह प्रतिभा भएपनि उनीसगं न त प्रस्तुत गर्ने माध्यम थियो न त व्यक्त गर्ने साधननै । उनीसगं भएको प्रतिभाका साथै विचैमा पढाई छाड्नु परेको भिडियो विभिन्न सञ्चार माध्यममा आयो । गुल्मीका सचिन परियारको प्रतिभा देखेर ईन्द्रेणीका कृष्ण कडेंलले काठमाण्डौ लिएर आउन आग्रह गरे ।
सम्बन्ध बलियो बनाउन अपनाउनुस् यी पाँच उपाय
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र १ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल